शैलुङ्ग अब देशकै पर्यटकीय गन्तव्यस्थल ! - Narayanionline.com Narayanionline.com शैलुङ्ग अब देशकै पर्यटकीय गन्तव्यस्थल ! - Narayanionline.com
शैलुङ्ग क्षेत्रको विकास गर्ने मुख्य उदेश्य सहित प्रथम शैलुङ्ग महोत्सवको आयोजना गरिएको छ । शैलुङ्गलाई देशकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यको साथ यही वैशाक १३, १४ र १५ गते शैलुङ्ग महोत्सवको आयोजना गरिएको हो । ऐतिहासि, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक रुपमा धनी भएपनि शैलुङ्गमा विकासको गति अगाडि बढन सकेको छैन् । शैलुङ्ग क्षेत्रको विकासमा दोरम्बा गाउँपालिकाले सक्रियता देखाएको छ ।
साथै महोत्सवमा दोलखाका मेलुङ्ग र शैलुङ्ग गाउँपालिकाले पनि साथ दिएका छन् । तीन वटा गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा रामेछाप र दोलखाको संगमस्थल शैलुङ्गमा ‘शैलुङ्ग सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटन’ महोत्वसको आयोजना गरिएको हो । दोरम्बा गाउँपालिकाले महोत्सवको लागि झण्डै ८० लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ । महोत्सवको लागि मेलुङ्ग र शैलुङ्ग गाउँपालिकाले पाँच÷पाँच लाख सहयोग गरेका छन् ।
महोत्सवको व्यवस्थापन भने दोरम्बा गाउँपालिकाले गर्नेछ । दोरम्बा गाउँपालिका प्रवक्ता अम्बिका प्रसाद गजुरेलले पर्यटन प्रर्बद्धन गर्ने उदेश्यले महोत्सवको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । दोरम्बा गाउँपालिकाले महोत्सव गर्नको लागि करिब ८० लाख लाग्ने अनुमान गरेको छ । शैलुङ्गको विकासको लागि तीन नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलको पहलमा करिब एक करोड रुपैयाँ गुरु योजना निर्माणको लागि बजेट पनि विनियोजन भएको छ ।
शैलुङ्गको आफ्नै मौलिकता छ । प्राकृतिक रुपमा धनी शैलुङ्गको आकर्षण बनेको छ, धार्मिक पर्यटन । शैलुङ्गको विकास गर्न र नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा परिचित गराउनको लागि रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकाको पहलमा प्रथम शैलुङ्ग महोत्सवको आयोजना गरिएको छ । दोरम्बा गाउँपालिकाको अभियानमा दोलखाको शैलुङ्ग र मेलुङ गाउँपालिकाले पनि साथ दिएका छन् । रामेछाप र दोलखाले सैलुङ्गको विकासमा साझा धारणा सहित अगाडि बढने प्रतिबद्धता तीन गाउँपालिकाले गरेका छन् ।
शैलुङ्गको अवलोकन भ्रमणको लागि आउने÷जाने पर्यटकहरुको लागि मुडे, चरिकोट, तामाकोसी, देवीटार मिल्ती, मन्थली सित्खा नेपालकोथक चारैतिरबाट सडक सञ्जालले जोडिएको छ । दोलखा र रामेछापको दुवै क्षेत्रबाट शैलुङ्ग पुग्न सकिन्छ । शैलुङ्गको खोलाखर्क र दोलखाको ढुंगेमा बास बसेर पनि बिहानको सूर्योदय हेर्न सकिन्छ ।